नीताको करिअर किन धरमर ? « Khabarhub
नीताको करिअर किन धरमर ?
काठमाडौं – नायिका नीता ढुङ्गानाले अभिनय गरेको फिल्म ‘पञ्चायत’ ले उनलाई नसोचेको सफलता दियो । यही फिल्मबाट उनले अमेरिका भएको एक अवार्ड समारोहमा अवार्ड पनि जितिन् ।
तर, नीताका फिल्म व्यावसायिक रुपमा भने खासै सफल बन्न सकेका छैनन् । नीताले भोजपुरी फिल्ममा पनि काम गरिन् । तर, उनलाई कुनै फिल्मले पनि चर्चा दिलाएन । राम्रो अभिनय गर्ने खुबी भएकी नीता अहिले न त व्यक्तिगत जीवनका कारण चर्चामा छिन्, न त कुनै फिल्मका कारण ।
उनी अभिनित फिल्म ‘सोच’ को हालै ट्रेलर सार्वजनिक गरियो । तर, उक्त फिल्मले पनि नीताको करिअरलाई बल पु–याउने देखिँदैन । दशैँमा रिलिज हुने फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ को त राम्रै चर्चा छ । तर, फिल्ममा नायिकाका रुपमा नीताभन्दा बढी चर्चा साम्राज्ञी शाहको छ ।
अभिनयका हिसाबले नीता ढुंगाना राम्रो अभिनय गर्ने नायिका हुन् । खैर उनको चर्चा भने भएको पाइँदैन । हल्ला गर्ने र उत्तेजित हुनेहरु चर्चामा रहिरहने यो क्षेत्रमा नीताले भने दर्शकको ध्यान तान्न सकेकी छैनिन् ।
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७६, सोमबार ५ : ५७ बजे